मानिसहरु कसरी धनी हुन्छन् ? यस्तो रहेछ रहस्य - Himali Patrika
मानिसहरु कसरी धनी हुन्छन् ? यस्तो रहेछ रहस्य
हिमाली पत्रिका २२ चैत्र २०७७, 5:24 pm
साँच्चै नै धनी बन्ने चाहना छ भने आफू धनी भएको कुरामा विश्वास गर्न थाल्नुपर्छ । धनीहरुको जस्तो सोच हुन्छ आफूले पनि त्यस्तै सोच अँगाल्नुपर्छ, धनीहरु जस्तो व्यवहार गर्छन् त्यस्तै व्यवहार गर्न सुरु गर्नुपर्छ । रहनसहन एवं जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । विश्वासमा ठूलो शक्ति हुन्छ । जस्तो विश्वास राखियो आफू त्यस्तै भइन्छ । विश्वासको शक्तिमाथि विश्वास गरेर सोचाइमा परिवर्तन ल्याइयो भने धनी हुन कुनै मुस्किल छैन । तर विश्वासमा कुनै प्रकारको द्विविधा वा शंका हुनुहुँदैन । यसको विपरीत जो मानिस आफूलाई दरिद्र वा धनहीन ठान्छ ऊ सदैव दरिद्र ने रहन्छ । ऊ कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । यसकारण विश्वास अँगालेर जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
ईश्वर, प्रकृति वा आकाशसँग मानिसलाई दिनका लागि धेरै कुरा छन् । तर, त्यो कुरा मानिसलाई तबसम्म प्राप्त हुँदैन जबसम्म उसमा कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नका लागि मनको भित्रैदेखि तीव्र चाहना उमि्रएको हुँदैन । तीव्र चाहना भयो भने मागेको कुरामा शक्ति भयो भने मात्र इच्छित वस्तु प्राप्त हुन्छ । सतही ढंगले गरिएको मागमा बल हुँदैन र त्यसबाट केही पनि प्राप्त हुँदैन । ईश्वर, प्रकृति वा आकाशसँग कुनै वस्तु मागेर पक्का पनि पाइन्छ भन्ने विश्वासका साथ पर्खन सकियो भने अवश्य पनि त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ । निश्चित रुपमा प्राप्त हुन्छ । याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा चीज मागिसकेपछि त्यो प्राप्त नहुन्जेल अर्को वस्तु माग्नुहुँदैन अर्थात् माग वा इच्छा फेरिरहनुहुँदैन, एक पटकमा एउटै मात्र वस्तु माग्नुपर्छ ।
घरलाई वास्तुअनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । क्रोधको त्याग गर्नुपर्छ । बैठक कोठामा परिवारको हाँसोयुक्त तस्बिर राख्नुपर्छ । पूजास्थलमा धनवर्षा गरिरहेकी माता लक्ष्मीको फोटो राख्नुपर्छ । खाना जहिले पनि पूर्व वा उत्तरतर्फ फर्किएर खानुपर्छ । घरको पैसा राख्ने ठाउँमा तामा, पित्तल वा चाँदीका सिक्का राख्नुपर्छ । यसका साथै बेसारको चोइटो, पहेँलो कौडा, तामा वा चाँदीको सिक्का राख्नुपर्छ । घरलाई सुगन्धित बनाइराख्नुपर्छ । खल्तीमा सदैव केही सिक्का राख्नुपर्छ । प्रत्येक शनिबार पीपलमा जल चढाउने तथा सम्भव भएसम्म मंगलवारको व्रत बस्ने गर्दा धनी हुन समय लाग्दैन ।